Manchester United oo sii go’aamisay xidiga ay dooneyso inay badal kaga dhigato Pogba – Gool FM
Manchester United oo sii go’aamisay xidiga ay dooneyso inay badal kaga dhigato Pogba
(England) 12 Maajo 2019. Macalinka reer Norway iyo kooxda Manchester United ee Ole Gunnar Solskjær ayaa sii go’aamiyay xidiga uu doonayo inuu badal kaga dhigato Paul Pogba, kaasoo ku dhaw in uu ka dhaqaqo garoonka Old Trafford suuqa xagaaga ee soo socda.
Wargeyska maalinlaha ah ee “Daily Mail” ayaa xaqiijiyay maanta oo Axad in tababare Ole Gunnar Solskjær uu sii ishaartay laacibka reer Senegal iyo kooxda Everton Idrissa Gueye, si uu ugu noqdo badalka Paul Pogba xili ciyaareedka soo socda.
Sida ay wararku sheegayaan maamulka kooxda Manchester United ayaa waxay u arkaan in 29 jirka reer Senegal ee Idrissa Gueye, uu yahay laacibka ku haboon ee badalka u noqon kara xidigooda khadka dhexe ee Pogba, hadii ay dhacdo inuu baxo, maadaama lala xiriirinayo ku biirista kooxda Real Madrid.
Tababare Solskjær ayaa aaminsan in Idrissa Gueye uu u faa’ideyn doono kooxda Manchester United in ka badan xidiga reer France ee Paul Pogba, maadaama uu qaab difaacashada in badan ka fiican yahay xidigii hore kooxda Juventus.
Si kastaba ha ahaateen, xidiga khadka dhexe ee kooxda Manchester United Paul Pogba ayaa lala xiriirinayaa ku biirista safka Real Madrid suuqa kala iibsiga xagaaga ee soo socda, maadaama uu bar-tilmaameed buuxa ka dhiganayo macalinka reer France ee Zinedine Zidane.
Shaxda rasmiga ah kulanka Premier League ee kooxaha Burnley Vs Arsenal